Xinhua Myanmar - ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ဝန်က မြို့တော်၏လူနေရပ်ကွက်တွင် အလားအလာရှိသော တိုက်ခိုက်မှုအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေ
သမ္မတ အမေရိကန် ဝါရှင်တန်
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ Captiol လွှတ်တော်အဆောက်အဦတွင် အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လုံခြုံရေးယူထားသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) North America
“ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လွှတ်တော်အဆောက်အဦအတွက် စိုးရိမ်နေရုံသာမကဘူး ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ရဲ့ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်နေမိပါတယ် ” ဟု NBC သတင်းဌာနနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် Bowser က ဆိုသည်။
မြို့တော်အတွင်းရှိ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနယ်မြေများတွင် lockdown ပြုလုပ်ထားခြင်းကို ကျယ်ပြန့်စွာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ သို့သော် မြို့တော်ဝါရှင်တန်ရှိ လူနေရပ်ကွက်များသည် ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်ဖြင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းလည်း မြို့တော်ဝန်က ဆိုသည်။
ဝါရှင်တန်ဒီစီ ဒေသခံများ ထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြုလုပ်မည့် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ၊ ယင်းအား တုံ့ပြန်ရန်အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု ချမှတ်ထားကြောင်း Bowser က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျနော်တို့ရဲ့ ရဲဌာနဟာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဉပဒေစိုးမိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ အမေရိကန်စစ်တပ် နဲ့အတူ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေပါတယ် ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေမှာ ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးမဆို ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဟန်ချက်ပျက်မသွားအောင် ထိန်းဖို့အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်း ကဆိုသည်။
ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်အနီးရှိ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှ လာရောက်ခဲ့သော Wesley Allen Beeler အမည်ရ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးအား လိုင်စင်မဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်ကိုင်ဆောင်မှုဖြင့် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့လယ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းအား လိုင်စင်မဲ့သေနတ်ကိုင်ဆောင်မှု နှင့် အခွင့်မရှိဘဲ လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုဖြင့် အရေးယူခဲ့သည်။ “ သဘောရိုးဖြင့်မှားယွင်းမှု” ဟု ၎င်းက ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် သူ့အား မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ပြုလုပ်ကာ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တွင် လာမည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သမ္မတကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားတွင် လုံခြုံရေးယူရန် အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၅,၀၀၀ တပ်ချထားကြောင်း ၊ ယင်းအတွက်ပင် မြို့တော်၏ ပုံရိပ်မှာ“ စစ်မက်ဇုန်” အသွင်သဏ္ဍာန်တစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း အမေရိကန်မီဒီယာများက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြသည်။(Xinhua)
WASHINGTON, Jan. 17 (Xinhua) -- Washington, D.C. Mayor Muriel Bowser on Sunday expressed concern about possible attacks on the city's residential area as President-elect Joe Biden's inauguration approached.
"I'm not only concerned about other state capitols. I'm also concerned about other parts of Washington, D.C.," Bowser said during an appearance on NBC News' Meet the Press.
Should an attack do happen to harm D.C. residents, Bowser said there isaplan in place to respond. "Our police department, working with our federal law enforcement partners and the United States army, quite frankly, also hasaplan to pivot if we have any attacks in our neighborhoods," she said.
A man from the neighboring state of Virginia, identified as 31-year-old Wesley Allen Beeler, was arrested Friday in downtown D.C. for carryingapistol without license, possession of an unregistered firearm and possession of unregistered ammunition. He was released Saturday on personal recognizance, saying after the release that he made "an honest mistake."
Up to 25,000 National Guard members have been authorized for the city to ensure the security of Wednesday's inauguration, transforming the city into what some U.S. media called "a war zone." Enditem
Previous Article တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ(၈,၀၀၀)နီးပါး အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ခြေလျင်ခရီးဖြင့် ဂွါတီမာလာကို ဖြတ်ကျော်
Next Article အမေရိကန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Alex Azar ရာထူးမှနုတ်ထွက်၊ Capitol အကြမ်းဖက်မှုကိုရှုတ်ချကြောင်း နုတ်ထွက်စာတွင် ဖော်ပြ